“Kudanana Kwenyu Sehama Ngakupfuurire”!​—VaHebheru 13:1 | Yokudzidza
“Kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire.”​—VAH. 13:1.
NZIYO: 72, 119
Zvinorevei kudanana sehama?
Nei zvichikosha chaizvo kuti tirambe tichidanana sehama?
Tingaratidza sei kuti tinodanana sehama?
1, 2. Nei Pauro akanyorera vaKristu vechiHebheru tsamba?
MAIVA mugore ra61 C.E. Ungano dzechiKristu dzaiva muIsraeri yose dzakanga dzisiri kunyanya kutambudzwa. Kunyange zvazvo muapostora Pauro aiva musungwa muRoma, aitarisira kuti aizosunungurwa munguva pfupi. Timoti uyo waaifamba naye akanga achangobva kusunungurwa uye vakanga vachironga kushanyira vaKristu vaiva kuJudhiya. (VaH. 13:23) Asi mumakore mashanu aitevera, Jerusarema raizokombwa “nemauto akadzika misasa” sezvakanga zvaprofitwa naJesu. VaKristu vaiva muJudhiya uye kunyanya vaya vaigara muJerusarema vane chimwe chinhu chavaizofanira kukurumidza kuita. Jesu akanga avanyevera kuti pavaingoona uprofita uhwu hwava kutanga kuzadzika vaifanira kutiza.—Ruka 21:20-24.
2 Pakanga pava nemakore 28 Jesu ataura uprofita uhwu, uye mumakore iwayo vaKristu vechiJudha vakatendeka vemuIsraeri vaipikiswa uye vaitambudzwa zvakanyanya. Kunyange zvakadaro, vaKristu ava vakanga vatsungirira matambudziko iwayo. (VaH. 10:32-34) Asi Pauro aiziva kuti vakanga vava kuda kusangana nemiedzo yakakura chaizvo kupfuura yavainge vambosangana nayo. (Mat. 24:20, 21; VaH. 12:4) Aida kuti vagadzirire chero muedzo wavaizosangana nawo. Vaizofanira kuramba vachitsungirira uye kuva nekutenda kwakasimba kwaizoita kuti varambe vari vapenyu. (Verenga VaHebheru 10:36-39.) Saka achitungamirirwa nemudzimu waJehovha, Pauro akabva anyorera hama nehanzvadzi idzodzo tsamba kuti avabatsire pane zvavaizosangana nazvo. Tsamba iyoyo ndiyo yatava kuziva sebhuku reBhaibheri raVaHebheru.
3. Nei zvichikosha kuti tizive zviri mubhuku raVaHebheru?
3 Zvinokosha chaizvo kuti tizive zviri mutsamba yakanyorwa naPauro kuvaKristu vechiHebheru. Nei tichidaro? Nekuti tiri kusangana nemiedzo yakaita seyaisangana nevaKristu ivavo. Munguva dzino “dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo,” vanhu vaJehovha vari kupikiswa uye kutambudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. (2 Tim. 3:1, 12) Tiri kutoratidza kuti kutenda kwedu kwakasimba uye kuti takazvipira kuna Mwari. Ndizvo hazvo kuti vakawanda vedu tiri kushumira Jehovha tisinganyanyi kutambudzwa. Asi kungofanana nevaKristu vomumazuva aPauro, hatifaniri kukanganwa kuti munguva pfupi iri pamberi apa, tichasangana nemuedzo unopfuura mimwe yose.—Verenga Ruka 21:34-36.
4. Rugwaro rwegore rwa2016 rwunoti chii uye nei rwakakodzera?
4 Chii chichatibatsira kuti tigadzirire zvinhu zvatichasangana nazvo pamberi apa? Mubhuku raVaHebheru, Pauro akataura zvinhu zvakawanda zvichatibatsira kusimbisa kutenda kwedu. Mundima yokutanga yechitsauko chokupedzisira chebhuku iri munotaurwa chimwe chinhu chinokosha chichatibatsira. Ndima iyoyo ndiyo yakasarudzwa kuti ive rugwaro rwegore rwa2016. Inoti: “Kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire.”—VaH. 13:1.
Rugwaro rwedu rwegore rwa2016: “Kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire.”​—VaHebheru 13:1
5. Zvinorevei kudanana sehama?
5 Zvinorevei kudanana sehama? Shoko rechiGiriki rakashandiswa naPauro rokuti phi·la·del·phiʹa, rinogona kureva “kuda munhu weukama.” Saka kudanana sehama kunoreva kuda munhu zvakadzama sezvatinoita munhu wemumhuri kana kuti shamwari yepedyo. (Joh. 11:36) Hatisi hama nehanzvadzi dzekunyepera, asi tinotova hama nehanzvadzi chaidzo. (Mat. 23:8) Rudo rwakadzama rwatinarwo runonyatsotsanangurwa nemashoko aya okuti: “Pakudanana sehama, dananai kwazvo. Pakukudzana, tungamiriranai.” (VaR. 12:10) Kana tikaratidza rudo irworwo pamwe chete nerwuya runonzi a·gaʹpe, rwunobva pakuteerera zvinodzidziswa naMwari, tinobva tanyatsobatana.
6. VaKristu vechokwadi vanoti kudanana sehama kuita sei?
6 Mumwe muongorori akati, “Mashoko okuti ‘kudanana sehama’ haawanzowanika mumabhuku asiri echiKristu.” Muchitendero chechiJudha, shoko rokuti “hama” dzimwe nguva raishandiswa kumunhu asiri weukama, asi munhu wacho aifanira kunge ari muJudha, kwete munhu wemamwe marudzi. Zvisinei muchiKristu, munhu wose ihama pasinei nokuti ndewerudzi rwupi. (VaR. 10:12) Sezvo tiri hama nehama, Jehovha akatidzidzisa kuti tidanane. (1 VaT. 4:9) Asi nei zvichikosha chaizvo kuti tirambe tichidanana sehama?
7. (a) Ndechipi chikonzero chikuru chokuti tidanane sehama? (b) Chii chimwe chinoita kuti tiwedzere kudanana?
7 Chikonzero chikuru ndechokuti Jehovha ndiye anoda kuti tidanane sehama. Hatigoni kutaura kuti tinoda Mwari asi tisingadi hama dzedu. (1 Joh. 4:7, 20, 21) Chimwewo chikonzero ndechokuti tinoda kutsigirwa nevamwe. Izvi zvinotokosha chaizvo patinenge tichisangana nematambudziko. Pauro aiziva kuti munguva pfupi, vamwe vaKristu vechiHebheru vaainyorera tsamba vaizofanira kusiya misha yavo uye pfuma yavo. Jesu akanga ataura nezvekuoma kwaizoita nguva iyoyo. (Mako 13:14-18; Ruka 21:21-23) Saka vaKristu ivavo vaifanira kudanana kupfuura zvavaiita kare.—VaR. 12:9.
8. Tinofanira kuitei iye zvino kutambudzika kukuru kusati kwatanga?
8 Munguva pfupi iri kuuya, mhepo dzokuparadza dzichasiyiwa, kutambudzika kukuru kwotanga. (Mako 13:19; Zvak. 7:1-3) Saka zvichange zvichikosha kuti titeerere mashoko aya akafemerwa okuti: “Vanhu vangu endai mupinde mudzimba dzenyu dzomukati, muvhare masuo. Vandai kwenguva duku kusvikira kutsamwa kwapfuura.” (Isa. 26:20) ‘Dzimba dzomukati’ idzi dzinogona kureva ungano dzedu. Muungano idzi tinonamata Jehovha tiri pamwe chete sehama nehanzvadzi. Asi hatifaniri kungogumira pakugara tichiungana nevamwe. Pauro akayeuchidza vaKristu vechiHebheru kuti vanofanira kushandisa nguva iyoyo kukurudzirana “kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo.” (VaH. 10:24, 25) Ino ndiyo nguva yokutowedzera kuda hama dzedu nokuti zvichatibatsira patichasangana nemiedzo yakasiyana-siyana mune ramangwana.
9. (a) Ndepapi patingaratidza kuti tinoda hama dzedu? (b) Taura zvakaitwa nevanhu vaJehovha zvinoratidza kuti vanoda hama dzavo.
9 Kunyange iye zvino kutambudzika kukuru kusati kwatanga, tinofanira kuratidza kuti tinonyatsoda hama dzedu. Hama dzedu dzakawanda dzakawirwa nenjodzi dzakadai sekudengenyeka kwenyika, mafashamo, madutu, matsunami kana dzimwewo njodzi dzinongoitika dzoga. Dzimwe hama dzinopikiswa uye dzinotambudzwa nevamwe vanhu. (Mat. 24:6-9) Kuoma kweupfumi hwenyika kuri kuitawo kuti titambure munyika ino yakaipa. (Zvak. 6:5, 6) Sezvo matambudziko aya achiwedzera, tinotofanirawo kuwedzera kudanana kwatinoita sehama. Kunyange zvazvo “rudo rwevazhinji ruchatonhora,” tinofanira kuramba tichida hama dzedu.—Mat. 24:12. 
TINGAITEI KUTI TIRAMBE TICHIDANANA SEHAMA?
10. Tava kuda kukurukurei?
10 Pasinei nematambudziko atinosangana nawo, tingaratidza sei kuti tiri kuramba tichidanana sehama? Muapostora Pauro paakati “kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire,” akabva ataura kuti vaKristu vangazviita sei. Iye zvino ngatikurukurei zvimwe zvinhu 6 zvaakataura.
11, 12. Zvinorevei kugamuchira vaeni zvakanaka? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
11 “Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka.” (Verenga VaHebheru 13:2.) Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kugamuchira vaeni zvakanaka,” rinoreva “kuitira mutsa vanhu vausingazivi.” Izvi zvinogona kutiyeuchidza zvakaitwa naAbrahamu naRoti. Vakaitira mutsa vanhu vavainge vasingazivi vakanga vavashanyira. Vakatozoona kuti vaeni vacho dzaiva ngirozi. (Gen. 18:2-5; 19:1-3) Saka mashoko aPauro akanga ari ekukurudzira vaKristu vechiHebheru kugamuchira vaeni izvo zvaizoratidza kuti vanoda hama dzavo.
12 Tinoratidza kuti tinoda vamwe here nokuvakokawo kumba kwedu kuti tizodya navo kana kuti tingotandara tose tichikurudzirana? Hatifaniri hedu kugadzira zvokudya zvakawanda-wanda kana zvinodhura kuti tinzi tinogamuchira vaeni zvakanaka, uyewo hatifaniri kukoka vaya chete vanogona kuzotiitirawo chimwe chinhu. (Ruka 10:42; 14:12-14) Chinangwa chedu chinofanira kunge chiri chokukurudzira vamwe kwete kuda kuonekwa. Kunyange kana tisinganyatsozivana nemutariri wedu wedunhu nemudzimai wake, tadii kumukokawo kumba kwedu? (3 Joh. 5-8) Kunyange zvazvo tiine zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuita zuva nezuva uyewo zvimwe zvinotinetsa, zvinokosha chaizvo kuti ‘tisakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka!’
13, 14. Tingaramba sei ‘tichifunga vaya vari mujeri?’
13 ‘Rambai muchifunga vaya vari mujeri.’ (Verenga VaHebheru 13:3.) Pauro akanga asiri kutaura nezvevasungwa vese vaiva mujeri. Aitaura nezvehama dzainge dzakaiswa mujeri nemhaka yekushumira Mwari. Naiyewo Pauro wacho akanga ava nemakore anenge mana ari mujeri paakanyora mashoko iwayo kuvaKristu vechiHebheru. (VaF. 1:12-14) Akavarumbidza nokuti vakanga vachinzwira “tsitsi vaya vaiva mujeri.” (VaH. 10:34) VaKristu ava vakanga vari kure chaizvo naPauro, saka vakanga vasingakwanisi kumubatsira sezvaiita vaKristu vaigara pedyo naye. Vaizoratidza sei kuti vari kumufunga? Vaifanira kuramba vachimunyengeterera nemwoyo wose.—VaH. 13:18, 19.
14 Isuwo tinogona kunge tiri kure chaizvo nehama dzedu dziri mumajeri. Tingasakwanisa kuvabatsira sezvavanoitwa neZvapupu zvinogara pedyo nemajeri avari. Asi tinogona kuratidza kuti tine hanya nehama dzedu idzi dzakatendeka uye kuti tinodzida kana tikaramba tichidzifunga uye tichitaura nezvadzo muminyengetero yedu, tichiteterera kuna Jehovha kuti adzibatsire. Somuenzaniso, tinombofungawo here hama nehanzvadzi dzakawanda uye dzimwe nguva vana vanombopinzwa mujeri kuEritrea, kusanganisira hama nhatu dzava nemakore anopfuura 20 dziri mujeri ikoko dzinoti, Paulos Eyassu, Isaac Mogos, uye Negede Teklemariam?
15. Tingaitei kuti tikudze wanano yedu?
15 “Kuroorana ngakukudzwe navose.” (Verenga VaHebheru 13:4.) Tinogonawo kuratidza kuti tinodanana sehama nokuramba takachena pane zvatinoita. (1 Tim. 5:1, 2) Kana munhu akatadza kuziva pokugumira, “opindira pakodzero” dzeimwe hama kana hanzvadzi nekuita unzenza hwepabonde nayo kana kuti nevamwe vanhu vomumhuri mehama kana hanzvadzi yacho, zvinoita kuti rudo ruri pakati pevaKristu ruparare nokuti panenge pasisina kuvimbana. (1 VaT. 4:3-8) Uyewo, funga kuti mudzimai anonzwa sei kana akaziva kuti murume wake ari kuona zvinonyadzisira. Tingati murume uyu anoda mudzimai wake here? Anokoshesa wanano yavo here?—Mat. 5:28.
16. Kugutsikana kunotibatsira sei kuti tidanane sehama?
16 ‘Gutsikanai nezvinhu zvinenge zviripo.’ (Verenga VaHebheru 13:5.) Kugutsikana muupenyu kunobva pakuvimba kwatinoita naJehovha. Kunotibatsira kuti tisanyanya kuda pfuma. (1 Tim. 6:6-8) Kunoita kuti tizive kuti ukama hwedu naJehovha uye nehama dzedu dzechiKristu hunokosha chaizvo kupfuura mari kana kuti zvimwe zvinhu. Munhu anogutsikana nezvaainazvo haagari achingonyunyuta, kana kutsvagira vamwe mhosva uye haaiti shanje kana kuva nemakaro. Unhu hwakadaro hunoita kuti atadze kuda hama dzake. Asi munhu anogutsikana anofarira zvakanaka zvinoitwa nevamwe.—1 Tim. 6:17-19.
17. Kuva “vakashinga kwazvo” kunotibatsira sei kuti tidanane sehama?
17 Ivai “vakashinga kwazvo.” (Verenga VaHebheru 13:6.) Kuvimba kwatinoita naJehovha kunoita kuti tive neushingi pasinei nematambudziko atingasangana nawo. Ushingi uhwu hunotibatsirawo kuti tive nemafungiro akanaka. Kana tiine mafungiro akadaro uye tichida hama dzedu, tichakwanisa kukurudzirana uye kunyaradzana. (1 VaT. 5:14, 15) Kunyange panguva yokutambudzika kukuru, vanhu vose vari munyika pavachange vava kutya, isu tichakwanisa ‘kumira takati twasu, takasimudza misoro yedu,’ tichiziva kuti kununurwa kwedu kwava pedyo.—Ruka 21:25-28.
Unokoshesa zvinoitwa nevakuru kuti vatibatsire here? (Ona ndima 18)
18. Tingaitei kuti tiwedzere kuda vakuru?
18 “Yeukai vaya vari kukutungamirirai.” (Verenga VaHebheru 13:7, 17.) Kana tikafunga nezvekushanda nesimba kunoita vakuru kuti vatibatsire asi vasingabhadharwi, tinonzwa tichida kuvatenda chaizvo uye tinowedzera kuvada. Hatitombodi kuita zvinhu zvinoita kuti vatadze kufara kana kuti vaite basa ravo vachigomera. Asi patinovateerera tichizviisa pasi pavo, tinenge tichivakudza “kwazvo murudo nokuda kwebasa ravo.”—1 VaT. 5:13.
RAMBAI MUCHIZVIITA ZVIZERE
19, 20. Tingaratidza sei kuti tiri kuwedzera kudanana?
19 Zviri pachena kuti vanhu vaJehovha vanozivikanwa nokudanana kwavanoita. Kunyange naPauro aizivawo kuti vaKristu vemunguva yake vaidanana. Asi akavakurudzira ‘kuti varambe vachizviita zvizere.’ (1 VaT. 4:9, 10) Saka tinokwanisawo kuwedzera pakudanana kwatinoita sehama.
20 Mugore rino rose, pose patinoona rugwaro rwedu rwegore, ngatifungisisei mibvunzo iyi: Zvii zvimwe zvandingaita panyaya yokugamuchira vaeni? Ndingaratidza sei kuti ndinoyeuka hama dziri mumajeri? Ndinoremekedza urongwa hwaMwari hwewanano here? Chii chichandibatsira kuti ndigutsikane muupenyu? Ndingaitei kuti ndiwedzere kuvimba naJehovha? Zvii zvandingaita kuratidza kuti ndiri kutsigira zvizere vaya vari kutungamirira? Kana tikaita zvinhu 6 izvi, rugwaro rwedu rwegore haazongovi mashoko ari pamadziro muimba yedu yoUmambo. Ruchatiyeuchidza kuti titeerere mashoko aya okuti: “Kudanana kwenyu sehama ngakupfuurire.”—VaH. 13:1.
^  (ndima 9) Mimwe mienzaniso inoratidza kuti Zvapupu zvaJehovha zvinoratidza sei kuti zvinoda hama dzazvo padzinowirwa nenjodzi iri muNharireyomurindi yaJuly 15, 2002 mapeji 8-9, uye bhuku raZvapupu zvaJehovha—Vazivisi voUmambo hwaMwari, chitsauko 19.